ကဘူးလ်လေဆိပ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၅ ဦးဒဏ်ရာရကြောင်း တပ်မှူးကြီး ပြောကြား - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန် ၊ ဩဂုတ် ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဩဂုတ် ၂၆ ရက် အစောပိုင်းက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ရှိ ကဘူးလ်လေဆိပ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦးသေဆုံးပြီး အခြား ၁၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာချုပ်အကြီးအကဲ က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်တပ်မှူးကြီး ဗိုလ်ချုပ် Kenneth McKenzie က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့တော်တွင် ယင်းနေ့နံနက်ပိုင်းက ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု နှစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ၊ ပထမဗုံးသည် ကဘူးလ်လေဆိပ် Abbey အဝင်ဂိတ်ဝ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နောက်ထပ်တစ်လုံးမှာယင်းနှင့်ကပ်လျက်ရှိ Baron ဟိုတယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ လေဆိပ်၌ ဩဂုတ် ၂၆ ရက်က ပေါက်ကွဲမှု နှစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သွားလာနေသူများအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး ကျဆုံးသွားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ် ၊ ပြီးတော့ နောက်ထပ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်” ဟု McKenzie က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ၎င်းက Abbey ဂိတ်၌ အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင် “ အိုက်စ်တပ်ဖွဲ့ဝင်(ISIS) သေနတ်သမားတွေဟာ အရပ်သားတွေနဲ့ စစ်သားတွေကို တရပ်စပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ” ဟု ဆိုသည်။ Baron ဟိုတယ် တိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လတ်တလောတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မသိရှိရသေးကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒီလိုသူရဲဘောကြောင်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုမှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဆိုတာသိရှိနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အခုချိန်မှာ အပတ်တကုတ် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ် ၊ အဲဒီလူတွေကို လက်တုံ့ပြန်အရေးယူမှုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်” ဟု တပ်မှူးကြီးက ဆိုသည်။
အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများအရ ကဘူးလ်ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိနေသော ရုပ်အလောင်း အနည်းဆုံး ၄၀ နှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၁၂၀ ဦးရှိကြောင်း ဆိုသည်။အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုသေနတ်သံများကို ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီခွဲအထိ ကြားနေရသေးကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ Tolo ရုပ်မြင်သံကြားက ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
တိုက်ခိုက်မှုတွင် လက်နက်ကိုင်စစ်သွေးကြွများစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းက ဆိုသည်။အမေရိကန် နှင့် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ထောင်ပေါင်းများစွာသည် လေဆိပ်အတွင်း လုံခြုံရေးအသင့်ယူထားပြီး လေဆိပ်အပြင်ဘက်တွင်မူ တာလီဘန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက လုံခြုံရေးယူပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုများကို အိုင်အက်စ်(IS) စစ်သွေးကြွများက လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းအရင်းအမြစ်များက ဆိုသည်။ကဘူးလ်လေဆိပ်အပြင်ဘက်၌ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအပေါ် တာလီဘန်တို့က ပြစ်တင်ရှုံ့ချထားပြီး အခင်းဖြစ်နေရာသည် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက လုံခြုံရေးယူထားသော နေရာဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရသူများထဲတွင် တာလီဘန်အစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ လည်းပါဝင်ကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။
WASHINGTON, Aug. 26 (Xinhua) — The head of U.S. Central Command confirmed Thursday that 12 U.S. service members were killed in an attack at the Kabul airport in Afghanistan earlier in the day, while another 15 were wounded.
Kenneth McKenzie, commander of the U.S. Central Command, told reporters duringapress conference at the Defense Department that two bomb attacks happened in the morning in the Afghan capital, one at the Abbey Gate of the Kabul airport, which was followed by another one at the adjacent Baron Hotel.
McKenzie said the attack at the Abbey Gate involvedasuicide bomber and was followed “byanumber of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces.” He said details about the Baron Hotel attack were not immediately available.
“We are working very hard right now to determine attribution, to determine who is associated with this cowardly attack and we’re prepared to take action against them,” the commander said.
Unconfirmed reports said at least 40 dead bodies and 120 wounded were transferred to Kabul hospitals.Gun firing could still be heard as of 8:30 p.m. local time, reported Tolo News TV, citing witnesses.
The report said several armed militants were involved in the complex attack.Thousands of U.S. and coalition forces soldiers were stationed inside the airport while Taliban members provided security for the outside of the facility.
Unofficial sources said the attack was launched by Islamic State (IS) militants.The Taliban condemned the bombing outside Kabul airport, saying it happened at an area where U.S. forces are responsible for security.Some Taliban guards were believed to be among the injured, according to reports.
The bombings came after Western nations warned ofaterrorist attack on the airport as thousands of people gathered waiting for evacuation flights to leave the country.
At least 90,000 people have been evacuated from Kabul airport since Aug. 14, one day before the Taliban captured Kabul. The airlifting process is expected to complete on Aug. 31.
Photo (1) Cellphone photo shows smoke rising near the blast site at the Kabul airport in Kabul, Afghanistan, Aug. 26, 2021. (Str/Xinhua)’
Photo (2) People are seen at the Kabul airport following the twin explosions on Aug. 26, 2021. (Str/Xinhua)